Ciidanka Dowladda oo gaaray goob ay ka taagneyd xiisad dagaal - Awdinle Online
Ciidanka Dowladda oo gaaray goob ay ka taagneyd xiisad dagaal
Ciidamada Amniga Dowladda Federaalka oo isugu jira Daraawiish, NISA iyo Boolis ayaa tagey deegaanno hareeraha Hobyo ku yaalla oo maalmihii la soo dhaafay shaqaaqooyin dhul la xiriira uu ka taagnaa.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug, Guddoomiyaha degmada Hobyo iyo ku xigeenkiisa, iyo Xildhibaanno barlamaanka Galmudug ka tirsan ayaa gaaray goobtaas, ayagoo u kuurgalay sidii wax u dhaceen, sidoo kale ciidamada amniga ayaa halwgalladoodii Magaalada Hobyo uu weli meeshiisii ka sii socdo.
Dadweynaha Hobyo ayaa soo dhoweeyey mas’uuliyiinta iyo ciidamada Amniga ee hawlgallada Hobyo ka wada, ee lagu qabqabtay kooxo amni-darro waday iyo kuwa kale oo ka ganacsada maandooriyaha.
Degmada Hobyo ayaa laga dareemayaa isbedel weyn iyo xasilooni ka dib markii la qabtay toboneeyo ka mid ah kuwii amniga magaaladaas dhibka ku hayey, qaar kalena lagu soo warramayo In halkaas ka soo carareen.
Previous articleIlhan Cumar oo eedeyn u jeedisay Trump oo isbitaal ku jira
Next articleMadaxweyne Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Rooble oo dalka ka dhoofaya